Dhaqanka & Diinta: Qaar baa cuna hilibka dadka dhintay! – Kaasho Maanka
Digniin: Sawiro muujinaya maydka dad dhintay ayaa ku jira qormadan.
Ragga qabiilka Yanomami
Qabiilka Yanomami-ga ee ku nool kaymaha Amazon-ka, qaasatan xadka Brazil iyo Venezuela, waxa ay leeyihiin dhaqan ah in ay cunaan hilibka qofka dhintay ee sokeeyaha ah. Falkani ayaga waxba ugama duwana, sida aad adiguba u cunto hilibka geela. Uma lahan wax dareen gooni ah, ama wax isla yaab ah, marka la barbar dhigo waxa aad adigu hadda dareemayso.
Qoys ka tirsan qabiilka Toraja ee Indonesia oo la taagan xubin kamida qoyskooda oo dhintay laba sano kahor
Bulshada Toraja-da ee Indonesia waxa ay leeyihiin dhaqan cajiib ah, kaas oo qofkii dhintay beri hore uu wali lasii noolaanayo kana mid ahaanayo qoyska. Xilliyada qaar maydkii ayaa lagusoo wareejinayaa, loona soo bandhigayaa dadka degaanka asaga oo si fiican loo nadiifiyay, looguna labisay. Arrintani ayaa waxaa ay u arkaan dabaal deg soo laabasho. Waxaa dhaqankooda ka mid ah oo aan ceeb ahayn in uu maydku la noolaado kana mid ahaado qoyska oo waxa ayba ula mid tahay sida qofka nooli uga midka yahay qoyska, wax argagax iyo dhibaato ahna kuma qabaan arintan.
Sawir muujinaya qaab labiska carabtii hore
Carabtii hore waxa ay lahaayeen dhaqanka ah in ay duugaan gabdhahooda, iyo in ay u labistaan qaabka aynu maanta ku naqaano ee ah xirashada qamiiska, cimaamada iyo cigaalkaba. Dhaqanka duugista iyo hab labiska waxa ay ahaayeen kuwo u gooni ah carabta oo aysan la wadaagin bulshooyinka kale ee ku dhaqan daafaha caalamka, sida dhaqanka qabiilka Yanomami-gaba uu ayaga ugu goonida yahay dhaqankooda ah cunista hilibka maytida qaraabada ah.
Nabi walba oo kasoo baxaa bulshooyinka aan kor ku xusay, waxaa hubaal ah in uu in badan ka hadli lahaa dhaqanka dadkiisa, asaga oo u arkaya in dhaqankaasi yahay mid caalami ah. Dhaqanka carabta waa dhaqan ay gabadhu cawro tahay, sidaa daradeedna in badan waxaa xoogga la saaraa in la asturo gabadhaas cawrada ah, halka dhaqanka Turkana-da iyo Bushman-ka Kalahari aysan wax cawra ah uga muuqan gabadha qaarka hore ka dhar la’.
Waxa ay sheegaan in Qur’aanka basharka oo idil loo soo diray, haddana waxaa ku jira oo waliba ku badan aayaddo ku kooban dhaqanka carabta uun oo aan wax xariir ah la lahayn caalamka intiisa kale, tusaale:-
Aayadani oo ka tirsan Suuradda Israa, Allaah waxa uu uga digayaa carabta in ay dilaan ilmahooda, oo ay aasaan gabdhahooda, ayaga oo ka cabsanaya faqri, Allaah waxa uu leeyahay, anaga ayaa quudina ayaga iyo adinka waalidka ahba, marka dilkoodu waa khalad aad u weyn.
Waa in aynu kala garanaa, oo aan kalana soocnaa dhaqanka carabta iyo diinta.
Sxp suaal ayaan ku waydinyaa
Diintee haysataa adigu
Inkastoo guurku yahay dhaqan soo jireena hadana markasta waxaa go'aamiya diimaha iyo dhaqamada kala duwan ee bulshooyinku kala leeyihiin. Guurka Soomaalidu wuxuu asal ahaan ku qotomaa diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Sida wax loo meheriyo, waxa la akhriyo, marqaatiyada iyo ka idan qaadashada waxa loo yaqaan "weliyul amriga" ama cidda gabadha dhashay oo la weydiisto waa dhaqan islaamka...
W/Q: Gallad Gurxan 20th May 2019